နှစ်သစ်မှာ ပိုကောင်းတဲ့ လိင်မှုဘဝ ရစေဖို့ | သိလိုရာမေး
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် နှစ်သစ်မှာ ပိုကောင်းတဲ့ လိင်မှုဘဝ ရစေဖို့
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးပြီး ဒီနေ့က ၂၀၂၀ နှစ်သစ်ရဲ့ ပထမဉီးဆုံးနေ့ဆိုတော့ သိလိုရာမေးပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သစ်ပါလို့ အရင်ဆုံးဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
သိတဲ့အတိုင်း နှစ်ဟောင်းကုန်ပြီး နှစ်သစ်တစ်ခုကို ရောက်လာပြန်ပြီဆိုတော့ နှစ်ဟောင်းက ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ အရာတွေကို မေ့ပစ်ပြီး နှစ်သစ်မှာ အရာရာကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာက အရေးကြီးဆုံးအချက်ဆိုတာ ပြောဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး… ဒီလိုပိုကောင်းအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အရာတွေထဲမှာ ငွေရေးကြေးရေးတွေလဲပါမယ်… ပညာရေးကိုလဲတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်… အရင်ကထက် အလုပ်တွေပိုကြိုးစားမယ်စသဖြင့် လူတိုင်းလူတိုင်းချမှတ်ထားတဲ့ New-year Resolution တွေရှိကြမှာအသေအချာပါပဲ…
ဒီလို အခြေခံကျပြီး ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ Resolution တွေလိုမျိုးပဲ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ရှောင်လွှဲမရနိုင်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လိင်မှုဘဝသာယာဖို့အတွက်လဲ Resolution ဆိုတာ ရှိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီတစ်ခေါက် သိလိုရာမေးကနေ စာဖတ်သူပရိသတ်တွေအတွက် နှစ်ဟောင်းမှာ ကို့ရို့ကားယား ကမောက်ကမဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေ နှစ်သစ်မှာ မတွေ့ကြုံရအောင် လက်တွေ့ကျတဲ့နည်းလမ်း (၄)ခုကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
ဒီနည်းလမ်း (၄) ခုကတော့…
(၁) အသစ်အဆန်းလေးတွေကို ဖန်တီးဖို့လဲ မမေ့ပါနဲ့…
နှစ်ကိုယ်တူချစ်ဇာတ်ခင်းချိန်မှာ အရင်လိုပဲ ဒါပြီး ဒါလုပ်၊ တစ်ခါလာလဲ Step by Step ရိုးအီနေတဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ပဲ အိပ်ရာထဲမှာ နှစ်ကိုယ်တူ ချစ်နေကြတုန်းပဲလား? အများနည်းတူ သမားရိုးကျတွေဆိုတာ ပျင်းဖို့ကောင်းပါတယ်… ဒါကြောင့်မို့လို့ နှစ်သစ်မှာ နှစ်ကိုယ်ကြားချစ်ဆက်ဆံရေးကို တိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အတူချစ်ရည်လူးကြတဲ့အခါမှာ လုပ်နေကြပုံစံမျိုးတွေနဲ့မတူဘဲ ပုံစံအသစ်အဆန်းလေးတွေကို Try ကြည့်သင့်ပါတယ်။
(၂) ချောဆီဆိုတာ အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုပါ…
ကဲ အသစ်အဆန်းလေးတွေ try ဖို့လဲ စိတ်ကူးပြီးတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ!! အသစ်အဆန်းလုပ်ပြီး ချောချောမွေ့မွေ့မဖြစ်ရင်လဲ စမ်းကြည့်တာပဲ အဖက်တင်ပြီး ဘာမှဆက်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ နှစ်ဟောင်းကထက် နှစ်သစ်မှာ ပြီးပြည့်စုံပြီး ရင်ခုန်ဖွယ်ရာ အခြေအနေမျိုးလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ချောဆီသုံးဖို့ဆိုတာလဲ အနည်းနဲ့အများလိုအပ်တတ်ပါတယ်။ ချောဆီ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Oil-based လို့ခေါ်တဲ့ အဆီကို အခြေခံပြီးထုတ်ထားတဲ့ ချောဆီတွေထက် Water-based လို့ခေါ်တဲ့ ရေဓာတ်အခြေခံပြီးထုတ်ထားတဲ့ ချောဆီအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
(၃) သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက် ဖလှယ်ပါ…
အားလုံးက New Year New Me ဆိုပြီး အော်နေကြတဲ့အချိန်မှာ နှစ်ကိုယ်တူချစ်ကြတိုင်း သူ့အကြိုက်လဲ ကိုယ်မသိ… ကိုယ့်အကြိုက်လဲ သူ့ကိုပေးမသိဘဲ နှစ်ယောက်လုံး ဘုမသိ ဘမသိ ပြီးပြီးရော အိပ်ရာထက်မှာ ဝုန်းနေကြတုန်းပဲလား? ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပိုကောင်းတာကို မျှော်လင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မျှော်တိုင်းဝေးနေမှာပါပဲ။ ပြဿနာရှိရင် အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ပိုကောင်းတဲ့ လိင်မှုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် သူ့က ဘာကြိုက်တတ်တယ်… ကိုယ်ကရော ဘယ်လိုမျိုးကို ပိုလိုလားတယ်ဆိုတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြောပြပြီး အချိန်ယူတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
(၄) ကီဂယ်လေ့ကျင့်ခန်းကို သတိတရရှိပါ…
လိင်မှုဘဝသာယာဖို့ဆိုရင်တော့ မိန်းမနဲ့ ယောကျာ်းနှစ်ဉီးစလုံး ကျန်းမာရေးလိုက်စားဖို့ဆိုတဲ့ အခြေခံအချက်အပြင် မျိုးပွားအင်္ဂါတွေကို တစ်ဖက်တလမ်းကနေ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ဖို့ ကီဂယ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုလဲ မှန်မှန်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကီဂယ်လေ့ကျင့်ခန်းကို မှန်မှန်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လဲ မွေးလမ်းကြောင်းကြွက်သားတွေ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်စွမ်းအား ပိုကောင်းလာမယ်… အမျိုးသားတွေဆိုရင်လဲ သုတ်လွှတ်မြန်တဲ့ ပြဿနာတွေ လျော့နည်းလာမယ်… ဒီလိုမျိုး ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ အိပ်ရာပေါ်မှာ စိတ်ရှိတိုင်း နှစ်ကိုယ်တူကြမ်းလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကီဂယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်းလေးတွေကိုတော့ ဒီ Video မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်…
ကဲ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ခုပြောပြထားတဲ့ လက်တွေ့ကျကျ နည်းလမ်း (၄) ခုကို လိုက်နာရင်း နှစ်သစ်မှာ နှစ်ဟောင်းကထက် ပိုကောင်းတဲ့ လိင်မှုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ…